တရားမဝင်ဆေးဝါးအတုအန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ လူထုပညာပေးပြပွဲ ပြုလုပ်မည်: ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၂-''စံမညီတရား မဝင်ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဝါးအတုတို့၏ အန္တရာယ်
ခန္တီးမြို့ ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတာရိုးပြိုကျ၍ ဒေသခံများစိုးရိမ်နေ: ခန္တီး၊ ဇူလိုင် ၂၂ - စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ခန္တီးမြို့ ချင်းတွင်းမြစ်က
စစ်ကိုင်းတိုင်းရေကြီးမှုကြောင့် ပိတ်ထားရသောကျောင်း ၃ဝဝ ကျော်အနက် ၁ဝဝ ကျော် ပြန်ဖွင့်: ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၂-စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် ရက် ပေ
ကမ္တွ့ာအချိန်အကြာဆုံး ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်လာမယ့် နာရီပေါင်း ၇၂ဝ ကြာရုပ်ရှင်: စတော့ဟုမ်း- ဆွီဒင်ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်သူ အန်ဒါဝီဘာ့ဂ်ျက ဖန်တီးနေတဲ့ Am
စိတ်ရောဂါသည် မိခင်အိုကြီး စိတ်ချမ်းသာဖို့ အနှစ်၂ဝ လုံးလုံး အမျိုးသမီးလိုဝတ်စားသူ: ဂိုင်လင်- စိတ်ရောဂါသည် မိခင်အိုကြီးစိတ်ချမ်းသာဖို့ အနှစ်၂ဝ လုံးလုံး အမ
မျက်မမြင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံသံစုံတီးဝိုင်း: ကိုင်ရို- အယ်လ်နော်ဝဲလ်အေမယ် လို့ခေါ်တဲ့ အီဂျစ်တီးဝိုင်းဟာ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာအ
နိုင်ငံအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အဆင့်ကောင်းမှသာ နိုင်ငံတကာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာမည်ဟု ဒုသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေပြော: ရန်ကုန်- ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ နှစ်စဉ်ထုတ် ပြန်သည့် Doing Business အစီရင်ခံစ
သမိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပကတိအခြေအနေအတိုင်း၊ အမှန်အတိုင်းသိအောင် ရေးသားဖော်ပြပေးရန်လိုအပ်ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ပြော: ရန်ကုန်-တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က
မော်လမြိုင်တွင် ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် ရဟန်းတော်များနှင့် လူပေါင်းများစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်: ရန်ကုန်- မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရော မြို့နယ် ပျားတောင်ဒေသခံများ သဘာဝပတ်ဝန်
ဦးကျော်မင်းဆွေနှင့် ဗြိတိသျှကိုကိုမောင်အား တပ်မတော်မှ မီဒီယာဥပဒေဖြင့် ထပ်မံတရားစွဲ: The Voice Daily သတင်း စာ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်မင်း ဆွေနှင့် ကျည်ထောင်စ
M-Bwel (Online Editor) Website URL: 17
Jul Published in World News Be the first to comment! ချီလီနိုင်ငံ မြို့တော်တွင် နှင်းမုန်တိုင်း ကျသဖြင့် တစ်ဦးသေ၊ နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရ ဆန်တီရာဂို၊ ဇူလိုင် ၁၆ ချီလီနိုင်ငံမြို့တော် ဆန်တီရာဂို မြို့တွင် ဇူလိုင် ၁၅ ရက်က ဖြစ် ခေါင့်ဖြစ်ခဲနှင်းမုန်တိုင်း ရုတ်တရက် ကျဆင်းလာသဖြင့် သိန်းချီသော ဒေသခံများ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက် ခြင်းကိုခံစားရပြီး လူတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
Jul Published in World News Be the first to comment! ပါကစ္စတန်-အီရန် နယ်စပ်တွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၊ အရပ်သားနှစ်ဦး သေဆုံး တီဟီရန်၊ ဇူလိုင် ၁၆
Jul Published in World News Be the first to comment! မော်ရီတေးနီးယားနိုင်ငံတွင် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပမည်ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ မော်ရီတေးနီးယား၊ ဇူလိုင် ၁၆
အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတစ် နိုင်ငံဖြစ်သော မော်ရီတေးနီးယား နိုင်ငံ၌ သြဂုတ် ၅ ရက်တွင်ကျင်းပမည့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်အတွက် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပမည်ဟူသော အစိုးရကြေညာချက်ကို မကျေနပ်သူနိုင်ငံသားများသည် ဇူလိုင် ၁၅ ရက်က မြို့တွင်းလမ်းများပေါ်သို့ ချီတက်ဆန္ဒ ပြခဲ့ကြသည်ဟု ဇူလိုင် ၁၆ ရက် သတင်းရင်းမြစ်များအရ သိရသည်။ Read more... Subscribe to this RSS feed
3...56789...1112Page 8 of 2912 Latest Articles ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၂-''စံမညီတရား မဝင်ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဝါးအတုတို့၏ အန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နှင့် တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလူထု ပညာပေးပြပွဲ''ကို ဇူလိုင် ၂၉ ရ...23-07-2017 Hits:24 Others မိုးဆက်ကို ခန္တီး၊ ဇူလိုင် ၂၂ - စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ခန္တီးမြို့ ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်း တစ်လျှောက်တည်ဆောက်ထားသည့် ချင်းတွင်းမြစ်တာရိုး ဇူလိုင် ၁၈ ရက်ကပြိုကျခဲ့ရာ လူ...23-07-2017 Hits:52 life မိုးဆက်ကို ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၂-စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် ရက် ပေါင်း ၂ဝ ခန့်ပိတ်ထားခဲ့ရသော အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း ၃ဝဝ ကျော် အနက် ၁ဝဝ ကျော်ကို ပြ...23-07-2017 Hits:51 life မိုးဆက်ကို စတော့ဟုမ်း- ဆွီဒင်ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်သူ အန်ဒါဝီဘာ့ဂ်ျက ဖန်တီးနေတဲ့ Ambiancé ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အ ချိန်အကြာဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် စံချိန် တင...23-07-2017 Hits:180 World News မိုးဆက်ကို Business Info